Search ဂျပန်လို့ကား - GenFK.com
Search Results - ဂျပန်လို့ကား
စင်ဒရဲလား ပုံပြင် ~~~~
စင်ဒရဲလား ပုံပြင် ~~~ 🏅Improve Your Listening Skills with Yu 🎶🎶 🌸မင်္ဂလာပါ🌸 🎧 ဂျပန်စာမှာ Listening ပိုင်းအားနည်းလို့ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲမသိဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်😊😊 🔔Japan Video လေးတွေကတစ်ဆင့် နားယဉ်အောင် အရင်ဆုံး လေ့ကျင့်ရအောင်နော်😍😍😍 🎵Video လေးတွေ နားထောင်ခြင်းအားဖြင့် … 🏅အရင်ဆုံး Japan အသံတွေကို နားယဉ်လာမှာပါ😊 🏅Japan လူမျိုးတွေရဲ့ အသံထွက် လေယူလေသိမ်း လည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်🎶 🏅Vocab တွေလည်း တစ်ခါတည်း ကျက်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်နော်😄 🏅ပုံလေးတွေ ကြည့် ၊ နားထောင်ရတော့ မပျင်းတော့ဘူးပေါ့နော်😘😘 🏅ဒီလိုဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Listening Skill ကြွယ်လာမှာ အသေအချာပါပဲ 💪💪💪 🎧 Yu ရဲ့ အပတ်စဉ် ဗဟုသုတ Videoလေးတွေ ၊ ရိုးရာပုံပြင်လေးတွေ ၊ ညဏ်စမ်းပဟေဋ္ဌိလေးတွေ ၊ သင်ခန်းစာ Video လေးတွေ ကို စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအုံးနော်😘😘 ❣️ချစ်ရတဲ့ ဂျပန်စာ လေ့လာနေသူများအတွက် N5,N4,N3 Grammar ရှင်းလင်းချက်များ ၊ N5 to N1 Vocab အုပ်စုလိုက် စုစည်းဖော်ပြချက်များ ၊အခြေခံစကားလုံးများ၊နေ့စဉ်စကားပြောများ..စတဲ့လေ့လာစရာများစွာကို Yu Pageမှာ တင်ပေးထားပါတယ်နော် 😊😊 ❣️အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း မြည်သံစွဲ စကားလုံးလေးတွေ ရေးသားပေးလျက်ရှိပါတယ် ✌️✌️ 🎧ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကလေးဘ၀လေးတည်းက နှစ်ခြိုက်ခဲ့ရတဲ့ စင်ဒရဲလားပုံပြင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် 🎶🎶 🎧ကဲ.. ပုံပြင်လေးအကြောင်းကိုတော့ အားလုံးသိလောက်မှာပါနော်.. 🎧အဲ့ဒီဇာတ်ကြောင်းလေးကို ဂျပန်လို ဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုတာ အခုပဲ နားထောင်လိုက်ရအောင်😘😘 ❣️Improve Your Listening Skills with Yu 🎶🎶 ======================================== Your Success is Our Future ! ======================================= Yu Japanese Language Academy မှ 🌸🌸ဂျပန်သို့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ကျောင်းသွားတက်ချင်သူများအတွက် Scholarship ရရှိနိုင်သည့် ကျောင်းများအပါအ၀င် မိမိ နှစ်သက်တဲ့ကျောင်းများလျှောက်ထားပေးခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင် ။ 🌸🌸 ကျောင်းလျှောက်ထားတဲ့သူများအတွက် ၀န်ဆောင်ခ ( အခမဲ့ ) နှင့် ဂျပန်စာ N5 , N4 , N3 အထိ ( အခမဲ့ ) သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင် ။ 🌸🌸ဘာသာစကား အစုံ လစဉ်တန်းခွဲသစ်များကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိပြီး ၊ ပိတ်ရက် ၊ ကြားရက် ၊ ရုံးချိန်လွတ် အတန်းခွဲများမှ မိမိနှင့် အဆင်ပြေသော အတန်းကို ရွေးချယ်ပြီး တတ်ရောက်နိုင်ပါတယ် ။ 🌸🌸 အတန်းချိန်အဆင်မပြေသူများအတွက် မိမိ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်များဖြင့် ညှိုနှိုင်း၍ တတ်ရောက်နိုင်ပါ တယ်ရှင်။ 🌸🌸မိမိအရည်အချင်းနဲ့သင့်တော်တဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများစွာ ကိုလည်း Yu မှ ၀န်ဆောင်မှုအခမဲ့ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ ======================================= ❣️Yu Japanese Language Academy ☎️Ph : 09 960 110 221、09 960 110 223 📧Email : [email protected] 🏡Address : No-77 , 2nd floor , Insein Road ,Hlaing Township, Yangon ,Myanmar. (လှည်းတန်းကလာမည့် သုခမှတ်တိုင်ရှေ့ ၊ UAB ဘဏ်ဘေး နှစ်ထပ်မှာရှိပါတယ်ရှင် ။ ) ======================================== Yu Japanese language Academy 22 Jun 2018 · 36K views
အမျိုးတိ အားလုံး​တောင်းပင်​​ရေနန့်​ ဘဲကုန်​နိန်​လို့ mpအပြည့်​အဝမဆွဲ့လိုက်​လို့ နည်းနည်း​ချေ မုံပါ​ရေ...ငါရို့ရွာကပန်းမြဇံ ဇာတ်​ကား အဆုံးပိုင်​ပါ...
အမျိုးတိ အားလုံး​တောင်းပင်​​ရေနန့်​ ဘဲကုန်​နိန်​လို့ mpအပြည့်​အဝမဆွဲ့လိုက်​လို့ နည်းနည်း​ချေ မုံပါ​ရေ...ငါရို့ရွာကပန်းမြဇံ ဇာတ်​ကား အဆုံးပိုင်​ပါ... ရခိုင်တေးခြင်း ရခိုင်ဇာတ်ကား ရခိုင်သတင်း ရခိုင်ဟာသ 24 Jan 2020 · 5.6K views
ည...နက်​ပြီ​လေ....ဟိုး..နှစ်​..၄၀..​ကျော်​က ​ကော်​ပီ..သီချင်း..​အေး​အေး..​လေးပါ.. မူရင်းက ..Hown can I Tell Her About you.. ..ပထမဆုံး...မြန်​မာ..စာသား..သီချင်း​လေးက ..​နောက်​ဘ၀..​ရောက်​မှ..ဆုံ..​တွေ့မယ်​.. ..ဆိုတဲ့..သီချင်းပါ.. .. နှစ်​ကြာမှ...play boy..ကိုသန်းနိူင်​က.. မြန်​မာလို..ဆ်ိုပါ​သေးတယ်​.. ..စိန်​​ရွှေ​ငွေ...ကား.လဲရှိတယ်​​ပေါ့.. ထားပါ..​တော့.... ... နှစ်​၄၀..​ကျော်​က..သီချင်းစာသား.. မိုက်​တယ်​ ​တေး​ရေး..မသိခဲ့​ပေမဲ့..အခုလို..ပြန်​လည်​ တင်​ဆက်​..​ဖော်​ထုတ်​.ခွင့်​.ရတာ..ဂုဏ်​ယူပါ .. အာ့​ကြောင့်​..​ပြောတာ .ကြည့်​​တော့..အသက်​က..၃၀..၀န်းကျင်​ ဘာ​တွေလာ..​ကောမန့်​..​ရေးမှန်းမသိ.. .. ငါ..ဂစ်​တာစတီး..​တော့.. မင်း..အ​ဖေ..နဲ့..မင်း.အ​မေ..မဂ်​လာ.မ​ဆောင်​ ​သေးဘူး..​ပြောရင်​..စိတ်​ဆိုး.​သေးတာ.. ..မ​နေ့..တ​နေ့ကမှ..ဂစ်​တာကိုင်​..စင်​​ပေါ်တက်​ စကား​ပြောရင်​..အ​ပေါ်က.. အ​တော်​..​နောက်​တဲ့...လူ​...ထား​တော့ ... စာသားမမှား​စေရပဲ မူရင်း..​တေး​ရေး.ဆရာကို..ဂုဏ်​ပြုကြပါစို့ ... guitar..ကိုမြင့်​သိန်း..
ည...နက်​ပြီ​လေ....ဟိုး..နှစ်​..၄၀..​ကျော်​က ​ကော်​ပီ..သီချင်း..​အေး​အေး..​လေးပါ.. မူရင်းက ..Hown can I Tell Her About you.. ..ပထမဆုံး...မြန်​မာ..စာသား..သီချင်း​လေးက ..​နောက်​ဘ၀..​ရောက်​မှ..ဆုံ..​တွေ့မယ်​.. ..ဆိုတဲ့..သီချင်းပါ.. .. နှစ်​ကြာမှ...play boy..ကိုသန်းနိူင်​က.. မြန်​မာလို..ဆ်ိုပါ​သေးတယ်​.. ..စိန်​​ရွှေ​ငွေ...ကား.လဲရှိတယ်​​ပေါ့.. ထားပါ..​တော့.... ... နှစ်​၄၀..​ကျော်​က..သီချင်းစာသား.. မိုက်​တယ်​ ​တေး​ရေး..မသိခဲ့​ပေမဲ့..အခုလို..ပြန်​လည်​ တင်​ဆက်​..​ဖော်​ထုတ်​.ခွင့်​.ရတာ..ဂုဏ်​ယူပါ .. အာ့​ကြောင့်​..​ပြောတာ .ကြည့်​​တော့..အသက်​က..၃၀..၀န်းကျင်​ ဘာ​တွေလာ..​ကောမန့်​..​ရေးမှန်းမသိ.. .. ငါ..ဂစ်​တာစတီး..​တော့.. မင်း..အ​ဖေ..နဲ့..မင်း.အ​မေ..မဂ်​လာ.မ​ဆောင်​ ​သေးဘူး..​ပြောရင်​..စိတ်​ဆိုး.​သေးတာ.. ..မ​နေ့..တ​နေ့ကမှ..ဂစ်​တာကိုင်​..စင်​​ပေါ်တက်​ စကား​ပြောရင်​..အ​ပေါ်က.. အ​တော်​..​နောက်​တဲ့...လူ​...ထား​တော့ ... စာသားမမှား​စေရပဲ မူရင်း..​တေး​ရေး.ဆရာကို..ဂုဏ်​ပြုကြပါစို့ ... guitar..ကိုမြင့်​သိန်း.. Myint Thein 15 Aug 2020 · 4.8K views
TOKYO GHOUL,/စဆုံး-မြန်​မာစာတန်းထိုး HD, ဂျပန်​ ​သွေးစုပ်​ ဖုတ်​​ကောင်​ ဒီဇတ်​ကား ​ထဲ့ မှာ ​သွေးရဲသွန်​ရဲ ရက်​စက်​ သတ်​ပြတ်​ စား​သောက်​ အခန့်​​တွေပါဝင်​ဒါ​ကြောင်​ ​ကြောက်​စရာ ​ကောင်းပြီး က​လေးသူငယ်​​တွေ မကြည့်​ပါနဲ့ ပိုစတာကို Commတွင်​ကြည့်​ပါ 👇 Like,share ​ပေးကြပါ တခြားလူ​တွေလဲ့ ကြည့်​ရ​အောင်​ မူရင့်​အား...Crd,​ပေးပါတယ်​😊😊😊
TOKYO GHOUL,/စဆုံး-မြန်​မာစာတန်းထိုး HD, ဂျပန်​ ​သွေးစုပ်​ ဖုတ်​​ကောင်​ ဒီဇတ်​ကား ​ထဲ့ မှာ ​သွေးရဲသွန်​ရဲ ရက်​စက်​ သတ်​ပြတ်​ စား​သောက်​ အခန့်​​တွေပါဝင်​ဒါ​ကြောင်​ ​ကြောက်​စရာ ​ကောင်းပြီး က​လေးသူငယ်​​တွေ မကြည့်​ပါနဲ့ ပိုစတာကို Commတွင်​ကြည့်​ပါ 👇 Like,share ​ပေးကြပါ တခြားလူ​တွေလဲ့ ကြည့်​ရ​အောင်​ မူရင့်​အား...Crd,​ပေးပါတယ်​😊😊😊 Mas ter Naing6Apr 2018 · 4.8K views
ကိုးရီးယားအပြာကားhunter x hunter episode 91-100 tagalog versionBleach español latino capitulo 145စပတျပုံShornalishobnomxnxubd 2019 frame tagalogဂွင်းထုnaucz mnie kochacnaucz mnie kochac odc 16 napisy plчөтгөрийн ангууч мөнхийн галт тэрэг бүтэнพลิกดินสู่ดาว (2006) EP.5​ဘော်​​ဘော်​က​ထော်​စဆုံးအောကားပေါင်းစုံJapanessအာသာဖြေfetısh selena gomez lyricsnadodi kadhal tamil full movieເລກຫວຽດهدیه ای از بهشت فیلم اسرائیلیကိုရီးယားအော်ကားအပြောကား